Amar ka soo baxay wasaarada warfaafinta ee Puntland oo shaqada looga joojiyey idaacada Daljir. – Radio Daljir
Juunyo 24, 2010 12:00 b 0
Garowe, June 24 – Waxaa maanta la xiray idaacada Daljir oo ka mid ah idaacadaha gobollada Puntland.
Amarkan shaqada looga joojiyay idaacada ayaa Wuxuu ku Cadaa Warqad ka soo baxday Xafiiska Wasiirka Warfaafinta ee Magaalada Garowe, Waxaana mas’uuliyiinta Idaacada ee dhamaan Xarumaha Puntland lagu Amray in ay joojiyaan Shaqa Warbaahineed ee ay hayaan ilaa Amar dambe.
Warqadan oo uu ku saxiixnaa Wasiir ku xigeenka Wasaarada Warfaafinta, Isgaarsiinta, Hidaha & Dhaqanka ee Dawlada Puntland C/Gani Salaad Guray, Mana jiraan Cadaymo sheegaya Sababaha keenay in Idaacada Albaabada la isugu laabo.
Warqada Shaqa joojinta ee maanta ka soo baxday Wasaarada Warfaafinta ee Puntland ayaa Waxaa la keenay Xarunta Idaacada Daljir ee magaalada Garowe Xilli ay Xarunta si toos ah uga socdeen Hawlihii warbaahineed iyo Diyaarinta Barnaamijyadii Idaacada.
Xiriiro Saxaafadu ay la samaysay Xubno ka tirsan Wasaarada Warfaafinta ee Puntland gaar ahaana C/qani Salaad Guray, islamarkaana ku Saxiixnaa Warqadan iyo su’aalo Arrintan ku saabasan ayuu Wasiirku Jawaabtooda ku soo koobay in idaacada loo xiray Amar Dawlada ka soo baxay.
Idaacada Daljir oo la aasaasay sannadkii 2003-du waa idaacada keliya ee laga dhegaysto dhammaan gobollada Puntland, xarumana ku leh magaalooyinka Galkacyo (HQ), Garowe, Bossaso, Buuhoodle, Buurtinle, Qardho; waxaa kale oo laga dhegaystaa dhul xeebeedka fog ee Puntland, bariga Somaliland, gobollada dhexe ee Somaliya, iyo dhul xeebeedka Yemen.
Waxaa ay idaacadu baahisaa barnaamijyo u badan arrimaha bulshada, barnaamijyo diini ah, warar dhexdhexaad ah, iyo barnaamijyo fara badan oo ay uga qayb qaadato horumarinta bulshada iyo xasiloonida wadanka, waana markii ugu horaysay ee Idaacada Daljir albaabada loo laalo, walow marar hore la xiray madaxda iyo shaqaalaha idaacada Daljir.
Lifaaq – wareegtada lagu joojiyey shaqada idaacada Daljir.
Xil. Adam X. Xuseen, mudane ka tirsan baarlmanaaka Puntland oo aan ka waraysany dagaal ka dhacay Kalayadh, Sool.